I-State of Ohio Dredge Fleet Sets Use Record Record - I-Ellicott Dredges
I-State of Ohio Dredge Fleet Sets Use Record Record Performance
I-OHIO, e-USA - UMnyango Wezemvelo wase-Ohio usanda kuqeda isizini yokuvuselela i2016, ususe ngaphezulu kwama-1 million cubic yards (i-apprx. I-765,000 m3) yezinto ezibunjiwe emachibini epaki yesifundazwe nezinye izakhiwo zombuso. Imikhumbi yokwehla kwesikebhe soMbuso iqukethe ikakhulu i-Ellicott Model 460SL swinging ladder dredges.
Amamitha ayi-1 million cubic sediment yiwo kakhulu asuswe emlandweni wohlelo lokwakhiwa kabusha kombuso.
I-Ellicott 460SL dredge, "i-BRUTUS"
Umqondisi we-ODNR, uJames Zehringer, uthi impumelelo ye-ODNR yaba impumelelo kubasebenzi abazinikele kanye nokusebenzisa amasu kwemithombo etholakalayo, esebenza ukuthuthukisa ukufinyelela kwe-boater kanye nekhwalithi yamanzi.
"I-ODNR isazibophezela ukwenza ngcono ukufinyelela echibini lase-Ohio futhi iyaqonda indima ebalulekile edlalwa ngamanzi aphilayo kuyo yonke imiphakathi yase-Ohio," kusho uZehringer. "Indlela yethu ebanzi yokwakha kabusha isebenzisa izisebenzi namathuluzi ngendlela esiza izindlela eziphephe zokuhambisa abagibeli ngenkathi basebenzela ukuhlanza amachibi ahlanzayo kubantu base-Ohio."
I-Ellicott 460SL Swinging Ladder Dredge, "CHIEF", ene-1965 Ellicott dredge, "INDIAN", ngemuva
E-2016, i-ODNR kanye namaqembu azimele basebenzisana ukumba nokukhipha udoti emigwaqweni etholakala emanzini, kubandakanya iBuckeye Lake, Grand Lake St. Marys kanye ne-Indian Lake. Lo mkhuba ukhulisa ukuzulazula nekhwalithi yamanzi ngokususa indle egcwele iphosphorus kanye nokwandisa ukujula kwamanzi.
Ama-dredger e-ODNR asuse impahla eyanele emachibini ase-Ohio kulo nyaka ukugcwalisa amaloli okulahla i-67,431, futhi uma lawo maloli alahlekile eboshelwe phezulu ngobuningi bawo, ayelula amamayela we-319.
"CONFLUENCE", enye i-460SL dredge
IBuckeye Lake ibinonyaka werekhodi lokudonswa kwamakhadi ama-cubic e-293,228 asuswe, eshaye irekhodi le-2015 lama-cubic yards we139,000 I-Grand Lake St. Marys iphinde yathola unyaka wokuqothula umlando wokususa izinto ezikhiqizwayo ngokuthatha i-405,523 cubic yards sediment, idlula irekhodi le-2015 lamamitha angama-364,590.
I-Indian Lake isuse i-100,054 yards cubic yadires dredred, futhi ishaya irekhodi le-2015 lama-cubic yards we-90,405. Le ndawo izobona okunye ukwanda ngonyaka olandelayo, njengoba i-Indian Lake izokwengeza esinye isibhakela ngesizini ye-2017, kusho i-ODNR.
Ezinye izindawo ezazidonswa phansi zihlanganisa i-East Harbour, i-Getley, iLake Loramie kanye namapaki wombuso weRocky Fork.
Isizini elandelayo ezoqala kabusha izoqala ngo-Ephreli 2017.